कलंकी चोकमा नेपालकै पहिलो अन्डरपास रोड बन्दै,धमाधम चौबिसै घण्टा काम ! | Arthatantra.com
कलंकी चोकमा नेपालकै पहिलो अन्डरपास रोड बन्दै,धमाधम चौबिसै घण्टा काम !
काठमाडौ । तपाई काठमाडौ नआउनुभएको अलि धेरै समय भईसक्यो भने काठमाडौको कलंकी चोक यहि हो र भन्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ ! अझ अब १/२ वर्षपछि मात्र काठमाडौमा पाईला पार्नुभयो भने कलंकी चोकले अर्कै परिचय बनाईसकेको हुनेछ ।
हो, यो भिडभाडमा तपाई धुलैधुलो र घण्टौंको जामलाई राहत दिने हिसाबले कलंकी चोकमा अन्डरपास रोड निर्माणको कार्यले गति लिएको छ ।
दिनको समयमा त यहाँ काम हुन्छ नै तर पुरै उपत्यका मस्त निद्रामा भएको रातको समयमा पनि यो चोकमा धमाधम निर्माण कार्य भईरहेको देख्न सकिन्छ । हामी रातको ११ बजे कलंकी चोक पुग्दा त्यहाँ धमाधम काम भईरहेको थियो ।
चीन सरकारको सहयोगमा कलंकी चोकमा नेपालकै पहिलो ‘अन्डरपास रोड’ निर्माण कार्य भइरहेको छ । यो आत्याधुनिक संरचना मात्र हुनेछैन, नेपालकै नमूना पनि हुनेछ । चक्रपथ विस्तार परियोजना अन्तरगत कलंकीमा नेपालकै पहिलो अण्डर पास रोडको निर्माण कार्य तिव्ररुपमा भईरहेको हो । अन्डरपास निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सनले कार्य गरिरहेको छ । अन्डरपास रोड निर्माणमा यतिबेला १० चिनीया कामदार र २० नेपाली कामदारले दिउँसो र रातिको सिफ्ट मिलाएर कार्य गरिरहेका छन् ।
८ सय मिटर लामो अन्डरपासमध्ये निर्माणमा संलग्नहरुले अहिले कलंकी चोकबाट बल्खुतिरको ४ सय मिटरतर्फको भागको काम द्रुत गतिमा अघि बढाएका छन् । यो भाग ३ महिनामा सम्पन्न हुने बताईएको छ । यो सकिएलगतै सितापाईलातर्फको ४ सय मिटरको कार्य सुरु हुने काठमाडौं सुधार योजनाले जनाएको छ ।
सुरुमा २०१७ जनवरीसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सांघाई कम्पनीले अन्डरपासको निर्माण सन् २०१८ को जुलाई अगावै सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अन्डरपासको निर्माण पछि कलंकी चोकमा ट्राफिक नै बस्नु नपर्ने र ट्राफिक जाम पूर्णरुपमा हट्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस ६
अब घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कुनै पनि वाणिज्य बैंकले ऋण नदिने, आजैबाट लागु काठमाण्डौं । वाणिज्य बैंकहरुले गाडी तथा घरजग्गामा केही समय ऋण लगानी रोक्ने भएका छन्। […]
एउटा राजमार्ग, जसले हिजोका ऋणीहरुलाई साहु महाजन बनायो सिन्धुली । नागबेली शैलीमा एसियाकै नमुनाका रुपमा निर्माण भएको बिपी राजमार्ग नयाँ प्रविधि […]